Maitiro Eti Kugadziridza Yako Kubasa Kune Vashandi Vanoshandisa Mawiricheya
Disiki: Iwe unofanirwa kuziva kuti ichi posvo chinoshanda kune chimwe chinhu mhando yevanhu (zvinoenderana yavo mamiriro).) Vamwe vashandi vanoshandisa mavhiripu hazviiti inoda pekugara kunzvimbo yavo kuti vaite mabasa avo ane chekuita nebasa. Vamwe vanogona chete inoda chiverengero chidiki cheidzi pekugara kuitira kuti vaite basa ravo. Aya matipi handiyo chete mhinduro inowanikwa yekugadzirisa nzvimbo yebasa revashandi. Heano a mashoma akakosha idzo.
Mibvunzo Unofanira Kuzvibvunza ...
Ndedzipi nzira dzekuwanika dzinoita mushandi anoda pabasa?
Ndezvipi pekugara zvinodiwa kuti mushandi ave akasununguka uye abudirire?
Ndeipi ingangodaro yekuwanika tekinoroji yaizo batsira kuvandudza hutano hwavo pabasa uye kudzikisira matambudziko nekukanganisa?
Wakambobvunza here mushandi nezvenzvimbo dzekugara dzinogona kuwanikwa?
Ndeapi mamwe mabasa ane chekuita nebasa ari kudzikamisa mushandi nekuda kwekukanganisa kwakadai?
Kana nzvimbo yebasa yakashandisirwa kuremara, mushandi akaongorora nekuona here kuti zviito zvakadaro zvinokwana kugarika kwavo nekugadzira pabasa?
Ita vashandi pamwe chete inoda kudzidziswa kwakanangana nezve wiricheya vashandisi kubasa?
Mabasa Ekurarama Kwemazuva Ose Vashandisi veWiricheya
Vanhu avo inoda zvavo mavhiripu kushandiswa pabasa ravo, kungangoda zvemunhu rubatsiro pavanenge vari paawa. Anoshandira haana basa rekupa wega rubatsiro, asi pane zviitiko apo mushandirwi anogona kuve nemhosva yekumwe dzimba kuti agone mushandi ari wiricheya mushandisi. Zvimwe zvezvido zvavo zvekuchengetedza zvinogona kusanganisira:
Kubvumira mushandi kuti auye nembwa yebasa kuti ishande.
Bvumira mushandi kutora mabhaidhi ekumanikidzwa ekushambidzira, kushambidzika, kana chigaro chigaro.
Bvumidza inochinja nguva yemushandi uye bvumidza zororo rekurwara kwenguva nenguva uye nekukurumidza kurapwa.
Kubvumidza mushandi kuunza muchengeti wega kuti ashande kuzobatsira nezvido zvavo.
hwiricheya vashandisi vanogona kusangana nemamwe mamiriro ezvinhu paanogumira munzvimbo yebasa. Iyi ndiyo mienzaniso yezviitiko zvakadaro uye zvinogona kugadziriswa kubasa.
Yega yekunyora rubatsiro kune avo vasingakwanise kunyora ivo pachavo.
Mahofisi emakomputa uye michina, senge kopi kana muchina wefax, inofanirwa kupihwa kukwirira kwakadzika. Izvi zvinobvumidza iyo wiricheya mushandisi kushandisa iyo midziyo pasina chero kunetseka.
Zvishandiso zvemuhofisi zvinofanirwa kunge zvichikwanisika ne remara mumwe nemumwe. Kuisa pasi pevhu kufambidzana masherufu uye makabati anobatsira kugadzirisa avo vanoida.
Izvi zvinofanirwa kuenda pasina kutaura, zvakadaro, kufambidzana kana kureba anoshandurika madhesiki uye / kana matafura emushandi asingakwanise kugara zvakanaka padare rakajairika tafura inofanirwa.
Kufaira makabati kunofanirwa kuve kufambidzana kune vashandi avo inoda izvo zvinodiwa, zvakanyanya kana mushandi achishandisa iyo yekufaira system nguva dzose mukati mezuva ravo.
Vamwe vashandi vanogona kuda a izwi rakamisikidzwa foni uye yakasarudzika-kuremara foni inouya nemabhatani mahombe. Vamwe zvinhu inosanganisira otomatiki izwi mail system uye / kana odhiyo mahedhifoni kana zvichidikanwa.
Computer Hardware iyo inobvumidza mushandi kuwana imwe nzira yekushandisa kumakomputa uye zvishandiso zvemakomputa. Zvimwe zvishongedzo zvinosanganisira trackball mbeva, kutaura kwekuziva software, uye akakosha mamaki.
Kubasa Chirongwa uye Vanononoka Kusvika
Kazhinji nguva, vanhu avo inoda mavhiripu kubasa kwavo vanogona kunonoka. Ivo vanogona kusangana nezvimhingamupinyi zvinogona kuvakanganisa ivo kugona kusvika kubasa nenguva. Naizvozvo, pekugara pakufamba kwavo uye nzira dzekufambisa zvingave zvichidikanwa.
Tele-commuting inogona kunge iri sarudzo kune munhu ane dambudziko uye anosangana nezvipingamupinyi munzira yavo yekuenda kubasa.
kufambidzana masuo uye migero yewiricheya kubvumidza shanduko inotsvedzerera kubva pamusuwo kuenda kune yavo pabasa tafura.
kuva kufambidzana zvigadzirwa zvakadai sehurema kufambidzana zororo uye dzimba dzekutyora chinodikanwa.
"Handicap Chete" nzvimbo yekupaka inofanirwa kuve chinhu chechivako chako.
Chirongwa chinofanirwa kusangana nezvido zvavo zvekuenda, zvinoenderana nekuti vanogona kuzvityaira pachavo kana kana vachishandisa ruzhinji kutakura.
[btn link = "https://www.karmanhealthcare.com/contact-us/" color = "orange" target = "_ blank"] Taura Nesu Kuti Uwane Info [/ btn]